Sehatra akustika tsara indrindra, tontonana rindrina 3d, taila akustika, mpanamboatra sy mpamatsy tontonana akôlôjia | Vinco
Panne acoustique lamba
Panne acoustique hazo
Panne acoustique polyester
Tontonana volon'ondry hazo
Fitaovana mandoko feo
Vola vita amin'ny vina vita amin'ny besinimaro
Fitaovana ambanin'ny tany
Fisarahana azo ovaina
Booth tsy misy feony
Varavarana tsy misy feo
Kilasy sy sekoly
Hotely sy trano fisakafoanana
Tontolo iainana Office
Maninona i Vinco
Fahalalana insulated feo
Fandrika baomba fitsaboana akustika
Takelaka akustika, tabilao tsy misy feony, fitokana-monina pa ...
Panamanga akustika mihantona, vidin'ny tontonana akustika, feo ...
Rahona misy valindrihana, tontonana akustika mihantona
Diffuser hazo ho an'ny studio
Volom-bolo vita amin'ny volon'ondry, tontonana akustika volon'ondry hazo, hazo ...
Mass vinina 2lb, sakana vita amin'ny vinyl
Barazy akustika, ambainy akustika, lamba firakotra akustika
Adiresy: Zone Industrial, BaoYunda Center, Xixiang Road, Xixiang Town, Distrikan'i Baoan, Shenzhen, Sina.
Sehatra akustika, tontonana rindrina 3d, taila akustika, tontonana fanamafisam-peo akustika
Sehatra akustika, tontonana rindrina 3d, taila akustika, tontonana fanamafisam-peo akora dia vita amin'ny polyester 100%, amin'ny alàlan'ny fanodinana fanjaitra. Ny fizotry ny famokarana dia ara-batana & ara-tontolo iainana tanteraka, tsy misy rano fanary, fandefasana, fako ,. tsy misy adhesive, ny maha-poria ny tontonana akustika dia mahatonga azy io handevona sy hampiditra insulative mafana.
Ny takelaka akustika PET antsika Tsy misy poizina, tsy mahazaka alikaola, tsy manelingelina ary tsy misy fatorana formaldehyde ary tsy mahazaka feo (NRC: 0.85).
Panne acoustique fibre polyester
Ny tontonana acoustique polyester fibre dia vita amin'ny fibre 100%, aorian'ny fanerena mafana ny endrika landihazo. Ary mampiasa presse hafa samy hafa izahay mba hahatratrarana ny hakitroka isan-karazany sy ahazoana antoka ny rivotra ao aminy, izay mahatonga azy io ho lasa vokatra mitroka feo sy insulation tsara.
Anaran'ny vokatra Panne acoustique fibre polyester
Akora 100% fibre polyester avo lenta
Size 1220 * 2440 * 9 / 12mm (ny hatevin'ny hafa azo namboarina)
hakitroky 160- 229kg / M3
Loko Tabilao loko
Vokatry ny fandrindrana feo 0.85
Fanoherana afo Kilasy B1
TONTOLO IAINANA Kilasy E1
Bika zoro Chamfer, mahitsy
Fampiharana Studio, akaninjaza, sinema, studio sns.
Sarin'ny tontonana acoustic fibre polyester:
Tombontsoa acoustique fibre polyester:
1) Fametrahana tsotra
2) Eco, tsy misy fofona, fiarovana ary mora diovina
3) Vokatry ny haingon-trano tsara, ary loko mihoatra ny 40 karazana
Fampiharana tontonana acoustic fibre polyester:
Ampiasaina be amin'ny trano opera, efitrano fanaovana horonan-tsary sy fahitalavitra, efitrano fandraisam-peo, efitrano fandefasana, fahitalavitra, efitrano misy asa maro, efitrano fihaonambe, efitrano fampisehoana, efitrano fandraisam-bahiny, tanàna fialamboly sy fialamboly, hotely, KTV, sns.
Fandefasana sy famonosana:
Fonosana polybag ny entana
Fitaterana: Amin'ny ranomasina na amin'ny rivotra
1. Asa - Manana mpiasa varotra matihanina izahay. Ny fanontaniana rehetra dia hovaliana ao anatin'ny 24 ora.
2. Vidiny - Satria orinasa izahay, ka afaka manome vokatra avo lenta sy ambany kokoa.
3. Serivisy - Mora sy mora entina, mampanantena daty fanaterana ara-potoana izahay, ary serivisy tsara aorian'ny fivarotana.
4. Ekipa - Manana departemanta injeniera manokana izahay, arakaraka ny fangatahanao ny namboarina manokana ho an'ny vokatrao.
1. Faly be izahay fa manome soso-kevitra momba ny vidiny sy ny vokatra ny mpanjifa.
2. Raha misy ny fanontaniana dia ampahafantaro anay izany amin'ny alàlan'ny mailaka na telefaona. Azontsika atao ny miatrika azy ireo ho anao ara-potoana.
1. Raha manana fandaharam-potoana ao Shina ny mpanjifa dia ampahafantaro anay. Tianay ny manampy anao hamandrika ny trano fandraisam-bahiny sy haka anao amin'ny seranan-tsambo, na ny gara.
2. Misy olana hafa, aza misalasala manontany, ary hiezaka mafy izahay hanome anao!
Manantena ny fanontanianao am-pitiavana
Teo aloha: Fandrika baomba fitsaboana akustika
Manaraka: Fampisarahana mivalona, ​​rindrina fisarahana mivalona
F: Mandra-pahoviana ianao no hanao santionany?
A. Matetika isika dia handray 1 ~ 7 andro hanaovana ireo santionany.
F: Inona ny ora fanateranao?
A. Ny fotoana fandefasana dia ao anatin'ny 15-25 andro aorian'ny nahazoantsika ny petra-bola.
F: Handoavinao vola ve ny santionany?
Ny santionany A.Standard dia maimaim-poana, fa ny santionany namboarina dia halefa amin'ny vidiny mirary ary ny entana dia ampandoavina. Aorian'ny fanamafisana ny kaomandy dia hamerina ny sarany mazava izahay. Azafady mba matokia izany.
A: Aloavy <= 1000USD, 100% mialoha. Fandoavana> = 1000USD, 30% T / T mialoha, fandanjalanjana alohan'ny fandefasana entana.
F: Azonao atao ve ny mandray OEM?
A: Eny, amin'ny maha mpanamboatra azy, afaka manokatra bobongolo izahay hamokarana vokatra akoranika akora araka ny santionanao na ny sary.
Raha manana fanontaniana bebe kokoa ianao dia aza misalasala mifandray aminay, misaotra!
Varavarana rindrina 3d haingon-trano, feon-kira akustika, ...
Manintona tontonana, tontonana akustika 3d, mitroka m ...
Takelaka fanamafisam-peo azo fehezina, rindrina akustika mandra-pahatongan'ny ...
Shenzhen Vinco Soundproofing material Co., Ltd. dia manam-pahaizana manokana amin'ny fitaovana fanamafisam-peo mandritra ny taona maro ary manome ny R&D, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy aorian'ny fivarotana ny vokatra.